वादी वालवालिका भन्छन, ‘हामी कहिले स्कूल जाने ?’ « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
सर्लाहीका बजारमा विषादीयुक्त आँप छयापछ्याप्ती
यी हुन् मेलम्ची बाढीमा बेपत्ता भएका २० जना
सर्वाेच्चलाई ओलीले पठाए जवाफ : अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन
मेलम्ची आयोजना दुर्घटना हुनबाट यसरी बच्यो
‘नेता खनालको स्वास्थ्य अवस्था पूर्ण जटिल छैन’
वादी वालवालिका भन्छन, ‘हामी कहिले स्कूल जाने ?’
दाङ, ३१ वैशाख । बा.. ईन्डिया गाछन, आमा बजार काममा गैछन । विहानै जान्छिन, साँझ आउछिन । भाई घर कुरेर बस्छु । उमेर १२ पुगिसकेका घोराही उपमहानगरपालिका– १६ दुर्गाभवानी टोल (वस्तीवस्ती) करण नेपाली वादीले यस्तै दुःखका सुस्केरा पोख्नुभयो । मजबुरीले बाबु भारत, आमा दैनिक बजार छिर्ने गर्दा घर कुरुवा भई दिन बिताउनुपर्ने वाध्यता छ । यही वाध्यताले लेख्नपढ्न नपाएको करणको भनाई छ । गरिवीले बाबु आमा दुवैलाई मजदुरीले डो¥याउदा पढ्न नपाएको बताउनुभयो । आधारभुत तह सम्मको शिक्षा सरकारले निशुल्क भनिए पनि गरीवी कारण करण जस्ता धेरै विपन्न वालवालिकाहरु शिक्षा वाट वञ्चित हुनु परेको छ नै ।
वादी वस्तीमा करिव ६० वादी परिवारहरुको आधाउधी वालवालिकाहरु विद्यालय गए पनि आधा परिवारका वालवालिकाहरु अझै विद्यालय जान सकेका छैनन । जसका कारण वादी वस्ती अझै शिक्षा वाट वञ्चित भइरहेका छन । पढ्ने लेख्न रहर धेरै पनि गरीवीले अशिक्षाको अन्धकारमा धकेलिरहनु परेको करणले बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो –‘ म कहिले स्कूल जाने हो बा आएसी … ? ’ बाबु पैसा कमाएर घर फर्किए पछि आफु स्कूल जाने रहर बुनेर बसीरहेका छन । तर बाबु धेरै ओहोर दोहोर गरीसके करण अझै स्कूल जान सक्नुभएको छैन । बाबु आमा लाई छोरा पढाई लेखाई गराउने ठूलो रहर भए पनि स्कूलमा नाम लेखाउने, किताब, कापी, झोला र ड्रेस किन्ने पैसा जोहो गर्न नसक्दा विद्यालय जाने उमेरलाई घरमै बिताइरहनु परेको उहाँको दुखेसो छ । ‘बा÷आमा, मेरो रहर पनि पढ्ने लेख्न नै हो, घरखर्चै टर्न गाह्रो छ केले स्कूल पठाउने बा आमा भन्नुहुन्छ ? ’ – करणले बताउनुभयो ।
घरको आर्थिक अवस्थाले सरकारी स्कूलको खर्च धान्न नसके पछि १३ वर्षिय अनिश नेपाली (वादी)ले बालमन्दिर प्राविको कक्षा २ को पढाई विचमै रोकी घर कुरुवा बस्नुप¥यो । नाम लेखाउने , कापी कलम किन्ने पैसा नहुदा स्कूल जान नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यो साल देखी स्कूल जान्छु भनेर सोचे पनि पुनः उस्तै समस्या अनिश स्कुल जान सक्नु भएन । गरीवीका कारण गरीवका छोराछोरीले पढ्न नपाउदाँ गरिव वस्तीका वालवालिका शिक्षा देखी वञ्चित हुनुपर्ने वाध्यता करण र अनिशलाई मात्रै होईन अन्य थुप्रै वालवालिकाहरु भेटिन्छ ।
सरकारले आधारभुत तह सम्मको शिक्षा लाई निशुल्क शिक्षा भने पनि त्यसले विपन्न वस्तीका वालावालिकाहरु छुन सकेको छैन । जसका कारण विपन्न समुदाय र वस्ती अझै शिक्षा अभावमा गुज्रिरहेका छन । उहाँले भन्नुभयो – ‘अरु साथी स्कूल जाँदा मलाई पनि जाऔ जाऔ लाग्छ ।’ लागेर मात्रै के गर्नु र घरवाट पुग्दैन ।’करण र अनिश प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुने विपन्नका कारण वादी वस्तीका थुप्रै वालवालिका विद्यालय जान वाट रोकिएका छन । भने कतिपय भर्ना भएका वालवालिकाहरु पनि विद्यालय जान सकेको छैनन ।
आर्थिक अभावकै कारण छोराछोरी पढाउन नसक्दा आफ्ना जस्तै दुख सन्तानहरुले भोग्नुपर्ने वाध्यता देखिएको स्थानीय राम वहादुर नेपाली(वादी)ले बताउनुभयो । भर्ना अभियानको बेला स्कूलमा भर्ना गरे पनि कापी कलम किन्ने पैसा नहुदा विचमै पढाई छुटाउनुपर्ने वस्तीको साझा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोहीले गिट्टी फोर्छाै, कोही मजदुरी गर्छाैं ,कसैले भाडाँ माझेर छोराछोरी पालेका छन । वस्तीमा सवैले गर्ने रोजगारी नै यही हो । अरुका काम दुई छाक टार्न मुस्किल हुदा प्रायको छोराछोरी स्कूल भर्ना भए पनि नियमित स्कूल जान नसक्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘ सरकारले दिने निशुल्क शिक्षा खै कहाँ छ ? हाम्रा गाउँमा आएको छैन ।’ भर्नाका लागि पैसा लाग्ने भएकाले धेरैले पैसा तिर्न नसक्दा छोरी घरमै राख्नुपर्ने वाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पैसा नहुदा कतिपय वालवालिकाहरु पढाई छोडी मजदुरी जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जसले गर्दा वादीवस्ती अझै अन्धकारतिर धकेलिरहेका छ । वालवालिकाको शिक्षा दिक्षामा राज्य गम्भिर हुन नसक्दा विपन्नका छोराछोरी शिक्षाको वञ्चितीकरणमा पर्नुपरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो –‘ पढाई लेखाई गरी हाकिम बनाउने रहर हाम्लाई पनि छ ।
आधारभुत तह सम्मको शिक्षा लाई सरकारले निशुल्क शिक्षा भनि रहे पनि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग रकम शुल्कका नाममा भर्ना र परिक्षा शुल्क उठाउदा विपन्न वालवालिकाहरुले शिक्षा देखी वञ्चित हुनुपरीरहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई दाङका प्रमुख रमेश प्रसाद मैनालीले बताउनुभयो । जसले गर्दा विपन्न समुदायका वालवालिकाहरु आधारभुत शिक्षा देखी पनि वञ्चित हुनुपरीरहेको छ ।
बन्द भयो चर्चित टेलिसिरियल ‘जुठे’
लामा गोल्डेनंउड शिवशक्ति निर्माण कम्पनीको बदमासीले कपिलवस्तुका जनता सस्ती भोग्दै
बीमा भरेमा अनुदान दिन्छु भनी ४० लाख ठगेको आरोपमा पक्राउ
फाइरिङ गर्दै सुनचाँदी पसलको लाखौं लुटपाट, ५ घाइते
निषेधाज्ञाको मौकामा महोत्तरीमा ९४ थान काठ बरामद